ရှပ်အင်္ကျီများ၏စျေးနှုန်းအတွက်ကြီးသောအရည်အသွေးအသွားအလာ | Martech Zone
စနေနေ့၊ ဇွန် ၁၃၊ ၂၀၁၅ သောကြာနေ့, ဖေဖေါ်ဝါရီလ 12, 2016 Douglas Karr
အကယ်လို့မင်း Jeremy Shoemoney ရဲ့ဘလော့ဂ်မှာမင်းမဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒါဟာနောက်လိုက်ဖို့ကောင်းတဲ့ဘလော့တစ်ခုပါ။ ဂျယ်ရမီမှာလည်းအစီအစဉ်ကြီးတစ်ခုရှိတယ် သောကြာနေ့အခမဲ့ရှပ်အင်္ကျီ.
ဂျယ်ရမီကမင်းရဲ့ရှပ်အင်္ကျီကိုဝတ်ဖို့လအနည်းငယ်ကြာမယ်၊ ဒါကလူကြိုက်များတဲ့ပရိုဂရမ်ပဲ။ ကျွန်တော်နည်းနည်းလောက်ပြောချင်ပါတယ် သက်ရောက်မှု ဤကဲ့သို့သောအစီအစဉ်တွင်ပါဝင်၏။ ဂျယ်ရမီ၏ဘလော့ဂ်သည်ရေတပ်စစ်ပြန်များနှင့်လုံးဝမပတ်သက်ကြောင်းထင်ရှားသည်။ သို့သော်သူ၏ဘလော့ဂ်သည် Word-of-Mouth စျေးကွက်ရှာဖွေရေးတွင်၎င်းအတွက်အစားထိုးသည်ထက်ပိုသည်။
ပထမလအနည်းငယ်မှာ NavyVets.com ကိုမြှင့်တင်ရန် Google Adwords မှ Pay-Per-Click Advertising ကိုဝယ်ယူခဲ့သည်။ မှတ်ပုံတင်ထားသောသုံးစွဲသူအရေအတွက်နှင့်ကျွန်ုပ်သုံးစွဲသောစုစုပေါင်းကြော်ငြာပမာဏကိုတွက်ချက်ရာတွင်မှတ်ပုံတင်ထားသောသုံးစွဲသူတစ် ဦး လျှင်ဒေါ်လာ ၈ ဒေါ်လာကျော်ပေးရသည် (ခေါ် - ပြောင်းလဲခြင်း) ။ ဒါကအရမ်းမြန်တယ်၊ အရမ်းမြန်တယ်။ အခုဆိုဒ်မှာဆွဲဆောင်မှုတွေရှိလာပြီဆိုတော့ကြော်ငြာဝယ်ယူမှုနှေးကွေးသွားတယ်။
လူမှုရေးကွန်ယက်များသည်သူတို့ကိုယ်သူတို့စျေးကွက်မြှင့်တင်ရာတွင်ကောင်းမွန်သည်၊ သို့သော်သင်ပထမ ဦး ဆုံးကောင်းသောနံပါတ်များကိုထရန်လိုအပ်သည်။ သေးငယ်သည့်အင်ဒီယားနားတွင်အသုံးပြုသူ ၁၀၀၀ ခန့်ရှိသည်။ ရေတပ် VET လက်ရှိ ~ 300 အသုံးပြုသူများမှာဖြစ်ပါတယ်။
နှိုင်းယှဉ်မှု၌, ဂျယ်ရမီအတွက်ရှပ်အင်္ကျီဝယ်ယူ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ဖြစ်ခဲ့သည် $ 16 နှင့်ကျွန်တော်အသစ် 8 ကြိုတင်မှာကြားထားကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည် မိမိအ post ကို၏ 24 နာရီအတွင်း။
၎င်းသည် ၈ ဒေါ်လာအစား ၈ ဒေါ်လာအစားပြောင်းလဲမှုနှုန်း ၂ ဒေါ်လာဖြစ်သည်။
သင်ဂျယ်ရမီကိုမြှင့်တင်လိုသည့် site ရှိသလား။ သူ့ကိုရှပ်အင်္ကျီပို့ပါ!
Tags: ဂျရမီ shoemoneyမင်္ဂလာပါတီရှပ်
MBP - မိုက်ခရိုဘလော့ဂ်ရေးဆွဲသူနှင့်ပရိုတိုကောလ်
မှတ်ပုံတင်ရန်နောက်ဆုံးအခွင့်အရေး - နေ့တစ်ဝက်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ
ဇွန် 14, 2008 မှာ 8: 11 pm တွင်
အွန်လိုင်းတီရှပ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုပိုင်ဆိုင်တဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဆီ ဒီပို့စ်ကို ပို့လိုက်ပါပြီ…….. သူ့အတွက် ကားအသွားအလာပုံစံအသစ်ဖြစ်နိုင်မလား? :) ဇော်ဇော်
3:2008 pm မှာအောက်တိုဘာ 1, 32
မိုက်တယ် ဒေါက်။ သြစတြေးလျမှာ ဒီလိုမျိုး တစ်ခုခုကို စလုပ်ရမယ်ထင်တယ်။